August 2016 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Author: lubo601 | 9:27 PM | No မှတ်ချက် |
❝ လွတ်မြောက်ခြင်း......ငှက် သို့ ဘယ်သူပြောလဲ သူသေတယ် ❞
ကျွန်တော့်အခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်တည်းရှိနေတုန်း နားထဲမှာ အသံတစ်ခုခုကို ကြားနေရတယ်။ အခန်းထဲမှာ အဲကွန်းကလေတိုးသံပဲ ရှိတာ။ သေသေချာချာ နားစွင့်နေတုန်း ကျွန်တော့်စိတ်မှာ အဲဒါ နာရီသံလို့ပဲ ကြားယောင်နေတယ်။ ကျွန်တော်သိတယ်။ ဒါ နာရီသံ မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်တော့်အခန်းထဲမှာ အသံကျယ်ကျယ်မြည်တတ်တဲ့ နာရီမှ မရှိတာ။ ဘယ်လိုလုပ် မြည်နိုင်မှာတဲ့တုန်း။ ဒါပေမဲ့နာရီသံကို ကြားနေရသလိုပဲ။ ကျွန်တော့်အခန်းမီးကို ပိတ်ပြီး ခုတင်ပေါ်မှာ ခဏလှဲလိုက်တယ်။ အခန်းတံခါးကို ကျွန်တော်ခလုတ်နှိပ်ပြီး ပိတ်ထားလိုက်တယ်။ ထပ်ကြားရတယ်။ နာရီသံတွေ.......။
Here UR သင့်အတွက်အရာရာဟောဒီမှာပါ
ဘာဖြစ်လို့ ဝလာတာလဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရအောင်။
အဓိကကတော့ အစားအသောက်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဝိတ်မကျတာက နေထိုင်စားသောက်ပုံက လိုအပ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။　ဒါကြောင့် ဘာကြောင့် ဝလွယ်တာလဲဆိုတာကို ရှင်းပြမယ်နော်။ ဘယ်နှစ်ချက် ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီလဲဆိုတာကို ကြည့်ရအောင်နော်။
ကျွန်တော့်မှာ ဘဏ်အပ်ငွေ ဆယ်သိန်းရှိတယ် ဆိုပါတော့...
တစ်နှစ်တိတိပြည့်တဲ့အချိန်မှာ အတိုး ၈ ရာခိုင်နှုန်းရလို့ ပြန်ထုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဆယ်သိန်းနဲ့ ရှစ်သောင်း ရပါလေရော...
ဪ... ဘဏ်မှာ အပ်ထားရတာ စိတ်လည်းချရ အတိုးလည်းရ တယ်ဟုတ်ပါလားလို့ ထင်နေတာပေါ့လေ...
မနှစ်က ကျွန်တော့်မှာရှိတဲ့ ငွေဆယ်သိန်းဟာ ဒေါ်လာ တစ်ထောင်နဲ့ ညီမျှတယ်ဗျ...
"နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံတွင် ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံ"
ဒီနေ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဧည့်သည်တော်များ ၊ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့တကွ ယခုလိုအချိန်မှာ ကျွန်မတို့နဲ့အတူ စိတ်အားဖြင့်ရှိနေတဲ့ ပုဂိုလ်များအားလုံး နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ ကောင်းကျိုးလိုရာ ဆန္ဒအဝဝနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနဲ့ ကျွန်မစပါရစေ။
ဖားကန့်မှ အထက်တန်းကျောင်းသူ မဂျာဆိုင်းအိမ်၊ ကျောင်းက
အိမ်အပြန်၊ လမ်းတွင် သေနတ်သံများကြား လဲကျ၊ အသက်ဆုံး
သွားရ။ နောက်ဘ၀များတိုင် သူ့စိတ်ထဲ ကျောင်းသွားလျှင်
သေနတ်မှန် သေတတ်သည်ဟုများ စွဲမှတ်သွားလေမည်လား။
မန္တလေးစာကြည့်တိုက် ဇော်ဇော် ၀၉၂၅၆၁၁၆၇၂၇
မိုးတွေရုတ်တရတ် အုံ့ဆိုင်းလာပြီး လျှပ်စီးတွေလျှပ်လာတယ်
အမေဖြစ်သူက သမီးကို အရမ်းစိတ်ပူသွားပြီး
ကျောင်းကပြန်လာမယ့် လမ်းအတိုင်း စက်ဘီးနဲ့ အမြန်နင်းသွားရှာတာပေါ့...
Author: lubo601 | 8:18 PM | No မှတ်ချက် |
ထိပ်တန်း ဝန်ကြီးကို မြောက်ကိုရီးယား ကွပ်မျက်၊ တောင်ကိုရီးယား ပြော
မူဆယ်မြို့ ကွမ်ရင်မယ်တော်သီလရှင်ကျောင်းတွင် ဘိန်းဖြူဘလောက်တုံးများ ဖမ်းဆီးရမိ
အလုံပိတ်ခန်းများဖြင့် ရောင်းချသည့် တရားမ၀င် ကော်ဖီဆိုင် ၄ ဆိုင်အား မန္တလေးတွင် ရှောင်တခင်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီး
ရိုးရိုးလေးဟိုတယ် လုပ်ငန်းလိုင်စင် ပြန်လည်ရရှိရန် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌ စာပို့
၂၁ရာစုပင်လုံညီလာခံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ
မန္တလေးမြို့ မှာ အလုံပိတ်ဆိုင် ၃ ဆိုင်အား ဖမ်းဆီး
ပြည်တွင်းသက်တော်စောင့် ၀င်းအောင် (ခ) ပတ္တလားအား ခြေချုပ်နှင့် ခံဝန်ဥပဒေဖြင့် ဖမ်းဆီး
၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံမှ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကို စတင် လျှောက်လှမ်းလိုက်ပြီဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆို
မြန်မာနိုင်ငံ ငလျင်ကော်မတီနာယက ဒေါ်လှလှအောင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Author: lubo601 | 9:21 PM | No မှတ်ချက် |
မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ချောက်မြို့နှင့် ၁၂ မိုင်အကွာကို ဗဟိုပြု၍ သြဂုတ် ၂၄ ရက် ညနေ ၅ နာရီ ၄ မိနစ် ၅၅ စက္ကန့်က ရစ်ခ်ျတာစကေး ၆ ဒသမ ၈ အဆင့်ရှိ အင်အားပြင်းငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ပုဂံရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေရှိ စေတီပုထိုးများ ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အပြင် ဆက်စပ်မြို့နယ် အချို့၌လည်း စေတီ ပုထိုးများနှင့် လူနေ အဆောက်အအုံများပျက်စီးကာ လူ အသေအပျောက်များရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါလှုပ်ခတ်ခဲ့သည့် ငလျင်နှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ငလျင်စာတမ်းများ၊ ငလျင် သုတေသနများ ပြုလုပ်နေသည့် အကြီးတန်းသုတေသနပညာရှင် မြန်မာနိုင်ငံ ငလျင် ကော်မတီနာယက ဒေါ်လှလှအောင်နှင့် မြန်မာ့သတင်း စဉ်က တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။
၁။ သင့်ဇနီးသည်ဟာ ပြည့်စုံသူမဟုတ်လို့ သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ။
၂။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်အရိုးထဲကအရိုးဖြစ်လို့ သူ့ကိုမရိုက်ချိုးပါနဲ့။
၃။ သင့်ဇနီးဟာ လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်၊ တန်ဖိုးထားပါ။
၄။ သင့်ဇနီးဟာ ရှားပါးတဲ့ကျောက်မျက်အရိုင်းလေးဖြစ်တယ်၊ သူ့ရဲ့မနာလိုစိတ်လေးတွေကို လမ်းမှန်တည့်ပေးပါ။
၅။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေပါ၊ သူ့ကိုရင်းနှီးစွာဆက်ဆံပါ။
#ခေါင်းထဲမှာက_အမှတ်တစ်ရာ_ရင်ထဲမှာက_သုညနှင့်_အပေါင်းအသင်းများ ရေးသားသူ- #မောင်သာချို
Author: lubo601 | 9:17 PM | No မှတ်ချက် |
စာရေးဆရာကြီးမြသန်းတင့် စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဘာသာပြန်ဆိုပေးသော ကျေးဇူးဖြင့် ကမ္ဘာ့ဂန္ထ၀င်ဝတ္ထုရှည်ကြီး အများအပြားကို ထိတွေ့မြည်းစမ်းခွင့်ရခဲ့ရာ စာရေးဆရာမ M.M. Kaye ၏ The Far Pavilions ၀တ္ထုရှည်ကြီးသည်လည်း တစ်ပုဒ်အပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ ဆရာက သည်ဝတ္ထုရှည်ကြီးကို “ရွှေပြည်တော်မျှော်တိုင်းဝေး”အမည်ဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤ၀တ္ထုပါ ဇာတ်လိုက်မင်းသား အက်ရ်ှက မိခင်ရော ဖခင်ပါ ကွယ်လွန်ပြီးနောက် ဗြိတိသျှကိုလိုနီ အိန္ဒိယ၌ စစ်ဗိုလ်ကလေးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။
ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ထိုင်နေတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ ပုခုံးပေါ်ကို ပိုးဟပ်တစ်ကောင် လာနားတယ်။ အမျိုးသမီး ဟာ သူ့ပုခုံးပေါ်က ပိုးဟပ်ကို မြင်တဲ့အခါ ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ အော်ဟစ်ခုန်ပေါက်နေမိတာပေါ့။
အဲဒီတော့ ပိုးဟပ်လေးဟာ သူ့ပုခုံးပေါ်ကနေ ထပျံသွားပြီးတော့ ဘေးက အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ကျောပေါ်မှာ နားပြန်တယ်။ ဟိုအမျိုးသမီးကလည်း နတ်ပူးသလို ဆွေ့ဆွေ့ကို ခုန်လို့။
အဲ့ဒီလို ဆိုင်တစ်ခုလုံး ပွက်လောရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ စားပွဲထိုးလေး တစ်ယောက် ရောက်လာတယ်။ သူဟာ အော်ဟစ် ခုန်ပေါက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးကို ငြိမ်ငြိမ်နေခိုင်းလိုက်တယ်။
ဘရာဇီးတွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း ဝက်တုပ်ကွေးကြောင့် သေဆုံးသူ ၁,၇၇၅ ဦးရှိ
ပင်လယ်ကနေထွက်တဲ့ အဖိုးတန်ပစ္စည်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ လူတိုင်းရဲ့မျက်စိထဲမှာ မုတ်ကောင်ကထွက်တဲ့ ပုလဲဆိုတာကို တန်းခနဲမြင်ကြမှာသေချာပါတယ်။ န၀ရတ်ကိုးပါး ရတနာစာရင်းဝင် ပုလဲလို တန်ဖိုးကြီးပေမယ့် ရတနာမဟုတ်တဲ့အရာ၊ ပုလဲထက်တောင်မှ ရှားပါးတဲ့ပစ္စည်း တစ်မျိုးကိုတော့ မြင်ဖူးတဲ့လူနည်းပါလိမ့်မယ်။မမြင်ဖူးတဲ့အပြင် သိတောင်မသိကြတဲ့လူတွေ တော်တော် များမယ်ထင်ပါတယ်။ဒီပစ္စည်းဟာ သဘာဝပုလဲထက် ပိုပြီးရှားပါးသလို ပိုပြီးတော့ ဒဏ္ဍာရီဆန်ပါတယ်။
မြန်မာဆေးကောင်းများ " စိတ်ညစ်ပယ်ချိုး စိတ်မဆိုး " ဆနွင်းလုံး
ကကတစ် နှင့် ကြာဟင်း
ကုန်းကျေး နှင့် ပုစွန်
ကန့်ချုပ်နီ နှင့် သေရည်သေရက်အမျိုးမျိုး
ကျွဲခေါင်းသီး နှင့် အချဉ်အမျိုးမျိုး(သံပုရာသီး)
ကြေးခွက် နှင့် အချဉ်အမျိုးမျိုး
ကုန်းငှက်သား နှင့် ကြက်ဆူဆီ
ကန်စွန်းမြစ် နှင့် နှမ်းမှုန့် 
T4K ဘဏ်ထဲကို ဓားပြနှစ်ယောက် ဝင်လာတယ်။
ဝင်လာလာချင်းပဲ အသင့်စောင့်နေတဲ့ ရဲအင်အား ၂၀ လောက်က ဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံလိုက်ရတယ်။
အံ့သြတကြီးဖြစ်နေတဲ့ ဓားပြခေါင်းဆောင်က ရဲတွေကို မေးတယ်... ...
"ခ... ခ များတို့က ဘဏ်ထဲကြိုရောက်နေပ့ါလား"
"ရောက်မှာပေ့ါကွ... မင်းတို့လာမယ်ဆိုတာ ကြိုသိနေတာကိုး"
"ဗျာ.... ဘယ်လိုလုပ် သိတာလဲ"
သိပ်မကြာခင်တုန်းက ကျွန်တော်လေဆိပ်သွားဖို့အတွက် တက္ကစီ တစ်စီးကို တားစီးခဲ့တယ်။ လမ်းမှာ အကွေ့လမ်းကနေ ကားတစ်စီးဟာ ကျွန်တော်တို့ တက္ကစီရှေ့ကို အရှိန်နဲ့ အတင်းထွက်လာတယ်။
တော်သေးတာပေါ့။ တက္ကစီသမားက ဘရိတ်ကို အမြန်ဆောင့်နင်းချလိုက်ပေလို့။ မဟုတ်ရင် ကျွန်တော်ရော တက္ကစီသမားပါ ပွဲချင်းပြီး သေနိုင်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ တဖက်ကားလူက ဆင်းလာ ပြီးတော့ တက္ကစီသမားကို ဆဲဆိုပါလေရော။
ဒါပေမယ့် တက္ကစီသမားကြီးဟာ ကားပေါ်က နည်းနည်းလေးမှမဆင်း၊ ပြုံးပြီးတော့ လက်ကာပြလို့ အသာငြိမ်နေတယ်။ ဒီတော့ တဖက်လူလည်း ဘာမှထပ်ရန်မရှာတော့ပဲ သူ့ကားပေါ်သူ ပြန်တက်လို့ ထွက်သွားခဲ့တယ်။
If Clause နှင့် အကျုံးဝင်သော ပုံစံခွဲများကိုလေ့လာခြင်း (၂)
‎Win Naing Oo‎ to အင်္ဂလိပ်စာစိတ်ဝင်စားသူများ
(7) UNLESS : မပြုသော်/လျှင် ၊ မဖြစ်သော်/လျှင်
Unless is followed by an affirmative verb to express "if ... not"
Unless ကို If.. not အစားသုံးနိုင်ပါတယ် ၊ Unless နောက်မှာ အငြင်းကြိယာမလိုက်ရပါဘူး ၊
not ရဲ့ သဘော အကျုံးဝင်ပြီးဖြစ်ခြင်း un- ပါခြင်းတို့ကြောင့် အငြင်းအဓိပ္ပါယ်ပါပြီးဖြစ်ပါတယ် ၊ အငြင်းဓိပ္ပါယ်အတိုင်းပဲ ပြောချင်လျှင် Not ထပ်ပေါင်းဖို့ မလိုပါဘူး ။
"ဝိပဿနာ" အလုပ်ဆိုတာ လုပ်ကြည့်မှ သိလာမှာပါ•••••
"ဝိပဿနာ" စတင် အားထုတ်ကြမည့် ဓမ္မ မိတ်ဆွေ များအတွက်.....
"ဝိပဿနာ" အားထုတ်ရန် "ကမ္မဌာန်း"တရား များစွာရှိတဲ့ အနက် တရားစခန်းတိုင်းလိုလိုက တရားအားထုတ်ကြသူ ယောဂီ များကိုအများအားဖြင့် "အာနာပါန ကမ္မဌာန်း" သာ ပေးလေ့ရှိတာကြောင့် "အာနာပါန သတိပဌာန်" ရှုမှတ် နည်း ကို ဆည်းပူးထားသမျှ တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
"အာနာပါ နဿတိ" ဟာ "ကာယာနုပဿနာ သတိပဌာန်" တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
"မဟာသတိပဌာနသုတ်"မှာ "ကာယ၊ ဝေဒနာ၊ စိတ္တာ၊ ဓမ္မာ" ဆိုတဲ့ အာရုံ ၄ မျိုးအနက် " ကာယ"ကို အဖန်ဖန်ရှုမှတ်ခြင်း "ကာယနုပဿနာ" အကြောင်းတင်ပြပါမယ်။
မိုးရာသီမှာယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ပညာရှင်တို့၏ အကြံပြုချက်များ
Author: lubo601 | 9:44 PM | No မှတ်ချက် |
🚜မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်သူတစ်ဦးအတွက် ဘယ်လိုရာသီဥတုမျိုးကအဆိုးဝါးဆုံး၊ သတိထားဖို့အလိုဆုံးလို့ ထင်ပါသလဲ?
📎တစ်ချို့နိုင်ငံတွေမှာရာသီဥတုလေးမျိုး (နွေဦး၊ နွေ၊ ဆောင်းဦး၊ ဆောင်း)၊
📎တစ်ချို့ နိုင်ငံတွေမှာရာသီဥတုသုံးမျိုး (နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း) ရှိပါတယ်။ ရာသီဥတုလေးမျိုးရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆောင်းရာသီအတွင်းလမ်းမတွေပေါ်မှာရေခဲ၊ နှင်းခဲတွေပိတ်ဖုံးတဲ့အထိဖြစ်တာကြောင့် မောင်းနှင်ရအဆိုးဆုံးအချိန်လို့ဆိုကြတယ်။
🚜ဒါပေမယ့် အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ NTSHA အဖွဲ့ကြီးရဲ့ ဆယ်နှစ်တာသုသေသနပြုမှုတွေအရ မိုးရွာနေချိန်ဟာ အန္တရာယ်အများဆုံးဖြစ် တယ်လို့ သိရပါတယ်။
U Than Win
ဖခင်လောင်းတွေအတွက်ရော ၊ အနီးပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေအတွက်ပါ လိုက်နာသင့်တယ်။
ထင်လို့ ဒါလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်....
အမျိုးသမီး တစ်ဦးဟာ ကိုယ်ဝန် ဆောင်နေ ရချိန်မှာ သာမန် အချိန်မှာထက်အများကြီး ပင်ပန်း နေတတ် ပါတယ်။ မွေးလာမယ့် ရင်သွေးလေး အတွက် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှား နေရပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ် မပါတာကြောင့်စိတ်ဓာတ် ကျတာမျိုးလည်း ဖြစ်ရတတ် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တစ်ဦး နဲ့ တွေ့ချိန်မှာ သူ့ စိတ်ကို ပိုမို မသက်မသာ ဖြစ်ရစေမယ့်စကားမျိုး မပြောမိ စေဖို့ ရှောင်သင့်တဲ့ စကားတွေကို ရေးသား လိုက်ရပါတယ်။
အစ္စရေး လူမျိုးလိုလည်း ခေါ်ကြပါတယ်။ ဂျူးလူမျိုးများဟာ ကမ္ဘာ့ရှေးအကျဆုံးသော လူမျိုးထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလည်း အမျိုးမျိုးဖိနိပ်ခံရပြီး တိုင်းပြည်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အထိ ဆုံးရူံးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂျူးလူမျိုးကို ကမ္ဘာမှာ ဥာဏ်ပညာအကောင်းဆုံးလူမျိုးလို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
၂၀၁၅ခုနှစ် ကမ္ဘာတစ်ခွင်မှာ ဂျူးလူမျိုး လူဦးရေး ၁၄.၂ သန်းရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ၀.၂%ရှိတဲ့ ဂျူးလူမျိုးဟာ....ဂျူးလူမျိုးများဟာ ၂၀ ရာစုအတွင်း နိူဘယ်စုရှင်များရဲ့ ငါးပုံတစ်ပုံ ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ သြဇာအရှိဆုံးသူများစားရင်းထဲက ၅၀% ၊ အမေရိကန် နာမည်အကြီးဆုံးသော ပါမောက္ခတွေထဲမှာ ၃၀% ၊ အမေရိကန် စာပေ၊ တေးဂီတ၊ ပြဇာတ်လောက မှာ ၆၀%၊ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး လုပ်ငန်းရှင်များ စာရင်းထဲမှာ ၅၀%၊ Forbes စားရင်းအရ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးသော ပုဂ္ဂိုလ် ၄၀ ထဲမှာ ဂျူးလူမျိုးက ၁၈ ဦး တို့ဟာ ဂျူးလူမျိုးဖြစ်ကြသလို၊ သမိုင်းမှာ အလွန်ကျော်ကြားကြတဲ့ အိုင်စတိုင်း၊ ကားလ်မတ်စ်၊ တာအုိုဝင် စသည်တို့ဟာ ဂျူးလူမျိုးဖြစ်ကြပါတယ်။
Author: lubo601 | 9:39 PM | No မှတ်ချက် |
ငွေကြေးခဝါချမူ ၂၀ ကျော် စိစစ် ဖော်ထုတ်နိုင်
အဂတိလိုက်စားမှုပပျောက်ရေး ထိရောက်စွာအရေးယူဖို့ လွှတ်တော်အမတ်တွေ တိုက်တွန်း
ဂိမ်းကစားနေလို့မိမိခလေး ရေကန်ထဲကျသွားတာကို မသိလိုက်တဲ့ မိခင်
ဗိုက်တာမင်ကြွယ်ဝသည်ဟုဆိုကာ ပြည်သူများ ခွေးသားများများစားကြရန် မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရ တိုက်တွန်း
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ပေကျင်းမြို့ ရောက်ရှိ
ဖခင်ကို သားအရင်းဖြစ်သူက တုတ်နဲ့ ရိုက်သတ်မှု့ဖြစ်ပွား
ဧရာဝတီမြစ်ရေ တိုက်စားမှုကြောင်း မင်းလှခံတပ်ကြီး၏ အောက်ခံမြေသားများလှိုက်စားလာ
ဆီတင်သင်္ဘောတစ်စီး ပြန်ပေးဆွဲခံရကြောင်း မလေးရှားအာဏာပိုင်များပြောကြား
မြောက်ကိုရီးယား သံတမန် ဆိုးလ်မှာ ခိုလှုံ
Khine Lay Shwe Taung
ကျွန်မ ထားမိတဲ့စေတနာတွေ အလကားဖြစ်ခဲ့ရပြီ ။ သူမကို အတော်လေး စိတ်ပျက်သွားမိပါတယ် ။ ကျွန်မကို ကျွန်မလည်း မချင့်မရဲဖြစ်မိပြန်တယ် ။ ဘာကိုနောင်တရ ရမှန်းမသိ နောင်တ ရနေမိတယ် ။ အဲဒီအတွေး အဲဒီခံစားချက်တွေနဲ့ပဲ တစ်ညလုံး ကောင်းကောင်းပင် အိပ်မပျော်နိုင်ခဲ့ပါဘူး ။ သူမအပေါ်ထားတဲ့ ကျွန်မ စေတနာကို စော်ကားလေခြင်းဆိုတဲ့ ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ ဝေဒနာကြီးကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားနေရတယ် ။ တကယ်တော့ သားသမီးချင်းစာနာစိတ်နဲ့ နားလည်မှု့တစ်ခုကို အရယူကြည့်ဖို့ ကြိုးစားမိတာပါ ။
မီးလင်းတာမြင်ရင် အက်ဒီဆင်ကို ကျေးဇူးတင်။ အက်ဒီဆင်ကို
ကျေးဇူးတင်ရင် အက်ဒီဆင်ရဲ့အမေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်။
အဲဒီလို အစပြုပြီး လူကြီးနှင့် ကလေး တစ်စု စကားဝိုင်းဖွဲ့ကြ
တစ်ခါက ကလေး တစ်ယောက် ကျောင်းက ပြန်လာ ဆရာမရဲ့
စာကို သူ့မေမေ လက်ထဲအပ် မေမေက ဖတ်ပြီးတော့ ပြုံးတယ်။
လူသိများသော သီချင်းရေးဆရာကြီးဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်(ရှမ်းလူမျိုး) မန္တလေးက ထင်ရှားတဲ့ သီချင်းရေးဆရာတဦးဖြစ်တဲ့ ဆရာစိုင်းခမ်းလိတ်ဟာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၄၉ ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ အဖ နမ္မတူအမတ်ကြီး ဦးရွှေကြီး နဲ့ မိခင် ဒေါ်စိန်ဥတို့က ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့မှာ မွေးခဲ့ပါတယ်။ ဦးရွှေကြီးဟာ ရှမ်းကဗျာဆရာကြီးတဦးဖြစ်ပြီး ကလောင်နာမည်က ခမ်းကာ (တုံဟုံး) ဖြစ်ပါတယ်။
Win Min PhyoFollow
ဪ...မန္တလေးသူတွေ "ကျွန်တော်....ကျွန်တော်" နဲ့ပြောတာဘာကြောင့်လဲ " အကြည်တော် "ပြောမှပဲသိရတယ်.......😄😆
"ဟဲ့..ဘယ်သူတုန်း;;;;" ဟုလှမ်းလှမ်းပြီမေးတယ် ။။။။
Zaw Min Latt feeling blah.
ဆံပင်ကိုsexyဖြစ်အောင်ဖွပြီး Room A7ကိုသွားပြီ။
ကျောင်းမှာ စာညံ့တဲ့သူတွေက ဘာကြောင့် ဘဝမှာ အောင်မြင်တတ်သလဲ?
Author: lubo601 | 9:20 PM | No မှတ်ချက် |
ကျောင်းမှာ စာတော်ရဲ့သားနဲ့ လက်တွေ့ဘဝမှာ ထင်သလောက် ဖြစ်မလာခဲ့တဲ့သူတွေ။ ကျောင်းမှာတုန်းက
စာညံ့ပြီး တကယ့်လူမှုဘဝထဲရောက်မှာ ထိပ်တန်းအောင်မြင်တဲ့သူတွေကို မကြာခဏဆိုသလို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ကျောင်းစာမှာ အားနည်းရဲ့သားနဲ့ ဘဝမှာ ဘာလို့အောင်မြင်တတ်သလဲဆိုတာကို ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ သူတို့ဆီမှာ စာတော်တဲ့သူတွေ၊ သာမန်သူတွေထက် အားသာချက်တစ်ချို့ကို တွေ့ရပါတယ်။
Author: lubo601 | 8:54 PM | No မှတ်ချက် |
လားရှိုးမြို့ မှာ ဓါးဖြင့်ခုတ်၍ ထွက်ပြေးနေသူအား ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှရှာဖွေနေ
တောင်ပြုံးပွဲသွားမဲ့ လိုက်ထရက်ကား၂စီးတိုက်မှုဖြစ် (ဓါတ်ပုံ)
အက်ဆစ်စက်ရုံကို တိုင်းလွှတ်တော် ရေးရာကော်မတီ စစ်ဆေး
နာဂဒေသမှာ ရောဂါ ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ခက်နေ
နှီးပဒေါ-ရောင်ဒေါင်း လမ်းမကြီးဘေးတွင် မွေးကင်းစ မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦး စွန့်ပစ်ခံရ
တိုက်ပွဲကြောင့် Shahtu Zup အစိုးရ စာသင်ကျောင်း ပိတ်ထား
ပါကစ္စတန်မှာ မွေးကင်းစကလေးငယ်တွေကို ရောင်းချတဲ့ ဂိုဏ်းတစ်ဖွဲ့ကို ဖမ်းဆီး
နေပြည်တော်တွင် ဆိုင်ကယ်နှင့်ဖုန်းခိုးလာသူလေးဦးအား သန်းခေါင်ယံအချိန်၌ဖမ်းမိ
တောင်သူတွေရဲ့ နစ်နာမှုတွေကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက မြန်မာ အလုပ်သမားတွေ ပြန်လာနိုင်ရေး ကူညီမည်
အင်္ဂတေကြမ်းခင်း ပြိုကျ၍ လူတဦးသေဆုံးခဲ့သည့် နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းဆေးရုံ တိုးချဲ့ဆောင်သည် ခွင့်ပြုချက်မဲ့ဆောက်လုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရ
တာမွေမြို့ နယ်ရှိ ဆေးရုံကြီး ၀င်းအတွင်း ဆောက်လက်စ တိုးချဲ့ ဆောင် ကြမ်းခင်းပြိုကျ၍ ၁ ဦး သေဆုံး ၊ ၁ ဦး ဒဏ်ရာရ
Author: lubo601 | 9:41 PM | No မှတ်ချက် |
Su Mg Mg
Author: lubo601 | 9:32 PM | No မှတ်ချက် |
အစိုးရသစ် ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲ ဒုက္ခတွေကို အားလုံးသိပြီး ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ စနစ်တကျ ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဒဏ် စုခံနေရတာ ကိုယ်ချင်းစာဖို့ လိုသဗျ။ အစိုးရဖြစ်လာတာနဲ့ ဥုံဖွဆိုပြီး မန်းမှုတ်လို့ ရသလားဗျာ။ ယခင်အစိုးရ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် လုပ်သွားတာ တိုင်းပြည်ကြီး ဘယ်အခြေအနေရောက် နေပြီလဲဆိုတာ အားလုံးသိတော်မူကြတဲ့အတိုင်းပါ။
တစ်ခါတလေ အစိုးရဟောင်းအဖွဲ့ကလူတွေ ထထပြီးယောင်တာ အလွန်နားကြားပြင်းကပ်သဗျာ။ မနေ့ကလည်း ဘာတဲ့ ကိုဌေးဦးတစ်ယောက် ကယောင်ကတမ်းနဲ့
“ကျွန်တော်တို့ပြည်သူက ရွေးတဲ့ အစိုးရသည် နိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို သူရအောင် လုပ်ရမှာပဲ။ သူလုပ်နေတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အံချော်နေတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က တည့်မတ်ပေးရမှာပေါ့” တဲ့။
ဟဲ … ဟဲ … အပြောလည်းကျတဲ့ ကိုဌေးဦးရေ သေချာတာ တစ်ခုက ဒီအစိုးရကို ရွေးချယ်ပေးတဲ့ အထဲမှာ ခင်ဗျားတို့ အုပ်စု မပါဘူးဆိုတာ ပထမ ပြောချင်သဗျ။
အမိမြန်မာပြည်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့သလို ဖာနိုင်ငံကြီး ဖြစ်နေပါပြီဆိုပြီး ဝမ်းနည်းပက်လက် ယူကျုံးမရ ဖြစ်နေသူတွေကို အားပေးချင်ပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့။ ပြည်သူအားလုံး ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားရင် ကျနော်တို့ နိုင်ငံလည်း ကမ္ဘာမှာ ထိပ်တန်းဖြစ်အောင် တက်လှမ်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်ပြောမယ့် ဖာနိုင်ငံကြီးအကြောင်း သိရအောင် ဆရာကြီး သော်တာဆွေရေးခဲ့တဲ့ စာတစ်ပိုဒ်ကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ ၁၉၃၉ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့ အခြေအနေကို တစ်စွန်းတစ်စ သိရပါမယ်။
Author: lubo601 | 9:31 PM | No မှတ်ချက် |
လေဖြတ်ခြင်းရောဂါ(Stroke) ဆိုတာ အရမ်းကို ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ မတွေးဝံ့စရာ ရောဂါ တစ်ခု ဆိုတာ အထူး ပြောစရာ လိုမယ် မထင်ပါဘူး။ stroke ဆိုတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ သက်ရှိ လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀အပေါ် ပြင်းထန်စွာ ထိုးနှက်လိုက်တဲ့ ရိုက်ချက်တစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန် သွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ လူကောင်း တစ်ယောက်ဟာ သက်မဲ့ အရာတစ်ခုလို အိပ်ရာပေါ် လဲပြီး ဝေဒနာတွေ ခံစားရင်းနဲ့ အသက်ဆုံးရှုံး သွားနိုင်သလို ကံကောင်းလို့ (ဒီ ကံကောင်းလို့ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို အောက်မှာ ပြန်ရှင်းပြပါ့မယ်) ပြန်ကောင်းရင် တောင်မှ ပုံမှန် သွက်လက် သန်စွမ်းမှုမျိုး ပြန်ရတာ တော်တော်ရှားပါတယ်။
အတိတ်က ပြုခဲ့သော ( ၃ ဘဝ ) ဝဋ်ကြွေး အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
အတိတ်ဘဝက ပြုခဲ့သောကံ ၊ လက်ရှိဘဝမှာ ပြုလုပ်ရမယ့် ကုသိုလ်နှင့် အနာဂတ်အတွက် ကုသိုလ်များအကြောင်းရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဘာသာပြန်ထားသည့်အတွက် အမှားများပါခဲ့သည် ရှိသော်
** လင်နဲ့မယားရယ်လို့ လက်ရှိဘဝမှာ ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြင့်
အတိတ်ဘဝကပြုခဲ့သော မိမိကုသိုလ်ကံကြောင့်သော်လည်းကောင်း ၊ အကုသိုလ်ကံကြောင့်သော်လည်းကောင်း အတူတူ မပြုမူခဲ့လျှင် အိမ်တစ်အိမ်ထဲတွင် မိသားစုအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
ဒေါ်စုနဲ့ တပ်ချုပ် တိုင်းရင်းဒေသ အပစ်ရပ်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဆွေးနွေး
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရော ဂါ ဖြစ်ပွားသူတွေများလာ
ရေဘေးဒုက္ခသည် ၄ သိန်းနီးပါး အတွက် ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ၃၅ဝဝ နီးပါး ထောက်ပံ့
ပါကစ္စတန် ဆေးရုံမှာ ဗုံးခွဲ၊ ၅၀ကျော် သေဆုံး
ဘီဘီစီအစီအစဉ်များ မြန်မာ့အသံမှာ တင်ဆက်မည်
တပ်မတော် ယာဉ်တန်းကို KIA တိုက်ခိုက်
နမ့်ဟိုင်တံတားအနီးတွင် ရဲယာဉ်တန်း အပစ်ခံရ
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်းရှိ ဆေးရုံ၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူ ၃၀ ဦး သေဆုံး၊ ၅၀ ဦး ဒဏ်ရာရ
မက္ကဆီကိုတွင် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း Earl ကြောင့် အနည်းဆုံး လူ ၃၈ ဦးသေဆုံး
KIO ဗဟို ဌာနချုပ် နယ်မြေမှာ အစိုးရတပ်နှင့် တိုက်ပွဲ ဖြစ်
လက်နက်မှုဖြင့် တရားစွဲခံထားရပြီး ထွက်ပြေးလာသူတစ်ဦးကို ခလယ်ရွာ၌ ဖမ်းဆီးရမိ
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ - (၂၁)ရာစုပင်လုံ ကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပ
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် တွေ့ဆုံ
Author: lubo601 | 10:47 PM | No မှတ်ချက် |
ညအိပ်ရာမ၀င်ခင် နောက်ဆုံးဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာနဲ့ ညကဘယ်လောက်နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်ခဲ့သလဲဆိုတာက နောက်တစ်နေ့မှာ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ အောင်မြင်သူတွေက သူတို့နေ့ရက်တွေရဲ့ အစနဲ့အဆုံးမှာ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းကျန်းမာမာရှိဖို့ အရေးကြီးမှန်း သဘောပေါက်ထားကြပါတယ်။
ဒီတော့ နေ့တစ်နေ့ရဲ့အဆုံးသတ်နဲ့ နောက်နေ့ရဲ့အစအတွက် အောင်မြင်သူတွေ ညမအိပ်ခင်ဘာတွေလုပ်ကြလဲဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်။
၁။ နေ့တိုင်း အနည်းဆုံး နာရီဝင်ခန့် အချိန်ယူပြီး သင့်ကလေးနဲ့ ဆွေးနွေးပါ။
၂။ အိမ်မှာနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း “ မင်္ဂလာပါ။ Good morning, Good night, စတဲ့ ယဉ်ကျေးတဲ့ စကားတွေနဲ့ နူတ်ဆက်သင့်ပါတယ်။
၃။ ကလေးများ ငယ်စဉ်မှ စ၍ တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေး ကို အကျင့်ပါပါစေ။
၄။ ကလေးရဲ့ စိတ်တွင်းစကားကို သေသေချာချာ နားထောင်ကြည့်ပါ။
စိတ်ရှည်ပါ။ မေတ္တာအပြည့်အ၀ သုံးပါ။ ပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်နဲ့ နားထောင်ပေးပါ။
၅။ ကလေးက်ို သတိပေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှ ကလေးရဲ့ အနာဟောင်းကို ခဏခဏ သွားမဆွ ပါနဲ့
စာနာမှုကန်းတဲ့ စာတန်းကို ဖတ်ပြီး
Author: lubo601 | 10:43 PM | No မှတ်ချက် |
ပထမကမ္ဘာစစ်သည် ၁၉၁၄ မှ ၁၉၁၈ အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သော ကြီးမားသော စစ်ပွဲမျိုး သမိုင်းတွင် တစ်ခါမှ မဖြစ်ဖူးသောကြောင့် မဟာစစ်ပွဲကြီး(Great war) ဟုခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ နောက် ၂၁ နှစ် အကြာတွင် နောက်တစ်ကြိမ်ကြီးကျယ်သော စစ်ပွဲကြီးပေါ်လာသောကြောင့် ပထမ ကမ္ဘာစစ်၊ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ဟု ခွဲခြားခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းတွင် စစ်သည်ပေါင်း ၉ သန်းကျော်သေဆုံးခဲ့သည်။ ထိုစစ်သည်များသည် စစ်ကြီးမဖြစ်ခင်က သာမန်ပြည်သူများ အများဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ကျဆုံးခဲ့သော စစ်သည်များအား ဦးခေါင်းမှနေ၍ခြေဖျားအထိဆက်လိုက်လျင် ၁၅၀၈၄ ကီလိုမီတာ၊ မိုင်အားဖြင့် ၉၃၇၅ ရှိသည်ဟု ပြောကြသည်။ ထိုအကွာအဝေးသည် ကမ္ဘာကြီးကို တစ်ပတ် ပတ်ပါက ထက်ဝက်နီးပါးခန့် ရှိမည်ဖြစ်သည်။
ယောက်ျားတွေမှာ နှစ်မျိုးပဲ ရှိတယ် တဲ့
နှာဘူး နဲ့ ဂန်ဒူး ဆိုလားး
နှစ်ခုတည်း ဘယ်က လိမ့်မလဲ
မသိရင် တစ်ခါတည်း မှတ်သွားကြ
စပါယ်ရှယ် နှာဘူး ဆိုပီး နှစ်မျိုး နှစ်စား ရှိတယ်။
လေ့လာသင်ယူသမျှ အမြဲတမ်းမှတ်မိနေစေဖို့ နည်းလမ်း (၄)ခု
အသိပညာ အတတ်ပညာတစ်ခုခုကို လေ့လာသင်ယူရာမှာ သိထားသင့်တဲ့အရာ နှစ်ခုရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုက လေ့လာသင်ယူမယ့် အကြောင်းအရာ၊ ဘာသာရပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အသိပညာဗဟုသုတတွေ ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုကတော့ လေ့လာသင်ယူမှု ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာကို သိထားဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံမကောင်းတာက ကျွန်တော်တို့ အခုလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ ပညာရေးစနစ်က ဒီအချက်နှစ်ခုစလုံး မပြည့်စုံတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Author: lubo601 | 10:42 PM | No မှတ်ချက် |
iPhone သုံးတဲ့သူတွေက အိတ်ကပ်မရှိတော့ဘူး.
လက်ထပ်ထားတယ့် သူတွေက လက်မထပ်မထားသလိုပဲ ခွဲနေကြတယ်.
မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဒီမိုကရေစီ (၂) [အမှတ် ၁ မှ အဆက်]